Ikhabhoni eguqulweyo Uluhlu lweedystopi elitsha ukusuka kwiNetflix | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uchungechunge lwe-dystopian entsha eguqukileyo yeCarbon Netflix
Uchungechunge lwe-dystopian entsha eguqukileyo yeCarbon Netflix Ubheja kwi ikamva lehlabathi apho Itekhnoloji iye yahlutha ubuntu ukuyiguqula ibe yinto efana nentengiso elula apho umbono wokufa uyekile ukuba yinto ebalulekileyo kuba ngoku yonke into Ihlabathi alinakufa.
Khawufane ucinge ngehlabathi apho itekhnoloji ihambele phambili kakhulu kangangokuba isivumela ukuba sibe nayo iikopi zethu zokulondoloza ezifakwe kwilifu, Ihlabathi elinomntu iqokobhe elilula (ikhava) kwaye anokutshintsha umzimba wakhe nanini na xa efuna, ilizwe elilawulwa bubukrelekrele bokuzenzela kwisitayile esinyulu Imbaleki yeBlade.
ICarbon echaziweyo Uthotho olutsha lweedystopi Netflix
«I-Carbon eguqulweyo yenzeka embindini wenkulungwane ye-XXV, ixesha apho abantu bengasafi, ngobuchwephesha, kodwa iingqondo zabo kunye nezazela zidluliselwa zisuka kwelinye mzimba ziye kolunye ... Utshintsho lwenoveli nguRichard K. Morgan egxile Kwimbali kaTakeshi Kovacs, umcuphi obandakanyeka kumayelenqe amakhulu, kwiminyaka engama-500 kwixesha elizayo, embindini welizwe le-cyberpunk. "
Netflix ebesele esishiye singathethi no ezinye ii-dystopias ezinje Black Mirror apho wasibonisa khona uluntu olusondeleyo kodwa usilela kwinyani kunye nengqondo apho Itekhnoloji yayiyeyona nto iphambili. Ngoku Isothuse ngolu luhlu lutsha apho itekhnoloji ibonisa uluntu olungenaxabiso kwaye ngaphandle koluvo lokuphila ngokupheleleyo kuba akusekho mntu kufunekayo ukuba afe kwakhona.
Inomdla kakhulu kuba sibona iindidi zentlalo ezahlukeneyo nanjengokuba ikwikamva elikude, uluntu luyaqhubeka ukwahlulwa ngamandla.
Netflix kuthatha ixesha emi kunye nentengiso yakho yoyilo okoko ukuyila ngokutsha umfanekiso wayo weqonga ngo-2015, ayikayeki ukusothusa ngazo zonke iintlobo zeembono. Uthotho njenge UNarco Ngekhe babekho ithandwa kangaka ngaphandle kwamandla okupapashwa okuhle. Kuyafana nange ICarbon echaziweyo apho benze khona uthotho lwe Imikhankaso yentengiso emnandi Enkosi kumbutho wayo, indibano kunye nefuthe apho umbono wentengiso ye-tovas ushiye ngasemva kwaye ubukho Phinda wenze iziqwengana esitratweni.
Ukuba ufuna ukubona enye iindaba kule ungacofa apha
Omnye umbono omangalisayo yayikukongeza imizimba kumanqaku ahlukeneyo ngokungathi yayiyimvelaphi yolu chungechunge, isebenza ngcono kakhulu kunokubeka ipowusta elula. Ukubetha kunye nentsusa.
Olu hlobo lwentengiso lwatsala ingqalelo enkulu kangangokubaUmntu othile weba enye yemizimba eMadrid, Mhlawumbi imeko yezithuthi sele iqalile? (xa ubona uthotho uya kuqonda)
Ukuba ukufumanisa oku kunomdla iindaba ungayifunda apha
La intengiso yoyilo ayisoze iyeke ukusothusa Obu bubuhle behlabathi lentengiso, likhangela iindlela zokuyila kwaye libeke ecaleni ezona zimvo zilula kancinci.
Ukuba ukhona ndiyithanda kakhulu intsomi, yee-dystopias, ze-Mirror emnyama, iBlade Runner, iMatrix okanye omnye umsebenzi wee-audiovisual zolu hlobo awukwazi ukuluphosa olu luhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uchungechunge lwe-dystopian entsha eguqukileyo yeCarbon Netflix
Imifanekiso eqingqiweyo egubungela uSodolophu wasePlaza eMadrid ngenkulungwane yayo ye-IV
El Collagendario ikhalenda yokuyila eyenziweyo ineeklagi